मिड सिजन ट्रान्सफर : सन्दीपसहित यी ४ क्रिकेटर नयाँ टिममा जान सक्छन्! »
Home/खेलकुद/मिड सिजन ट्रान्सफर : सन्दीपसहित यी ४ क्रिकेटर नयाँ टिममा जान सक्छन्!
काठमाडौंः १३औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) क्रिकेट यूएईमा जारी छ। कोभिड-१९ को कारणले यस वर्षको आइपीएल भारतमा नभएर यूएईमा जारी रहेको हो।
८ टिम सहभागी लिगमा कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यस सिजनका लगभग आधा खेलहरु समाप्त भइसकेका छन्। अहिलेसम्म बेंग्लोरले बाहेक अरु टिमले ६-६ म्याच खेलिसकेका छन्। ७ खेल खेलिसकेपछि आइपीएलमा यो पटक मिड विन्डो ट्रान्सफर हुँदै छ।
खेलाडीहरूले मध्य सिजन स्थान्तरण विन्डोको बखत एक टिमबाट अर्को टिममा जान सक्दछन्। खेलाडीहरू जो अझै आफ्नो प्लेइङ-११ मा मौका पाएका छैनन् वा अर्को खेलमा प्लेइङ-११ मा ठाउँ पाउने सम्भावना छैन। त्यस्ता खेलाडीहरू अन्य टोलीमा जान सक्छन्।
यो ट्रान्सफरबाट अहिलेसम्म टिमले महसुस गरेको कमी सच्याएर त्यही अनुसार खेलाडी अनुबन्ध गर्न पाउँछन्। तर यसका केही सर्त भने रहेका छन्। यो सिजनको आइपीएलमा कुनै पनि टिमका लागि २ भन्दा कम म्याच खेलेका खेलाडीलाई मात्रै ट्रान्सफरमा राख्न पाइन्छ। यसैगरी खेलाडीको अनुमतिले मात्रै ट्रान्सफर गर्न पाइने प्रावधान पनि राखिएको छ।
आज हामी यी ४ खेलाडीहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। जो मिड सिजन ट्रान्सफरमार्फत नयाँ टिमको हिस्सा हुनसक्छन्।
४. डेभिड मिलर
डेभिड मिलर आइपीएल २०२० मा राजस्थान रोयल्स टिमको सदस्य छन्। तर, यस सिजनमा अहिलेसम्म उनले एक खेलमा मात्रै खेल्ने मौका पाएका छन्। राजस्थानको टिममा धेरै दिग्गज खेलाडीहरू छन्।
४ विदेशी खेलाडीहरू कप्तान स्टिभ स्मिथ, जोस बटलर र जोफ्रा आर्चरको रूपमा नियमित खेल्छन्। केही दिनमै बेन स्टोक्स पनि टोलीमा सम्मिलित हुनेछ। त्यसैले विदेशी खेलाडीहरूको लागि ठाउँ छैन। डेभिड यस सिजनमा राजस्थान रोयल्सको लागि एक खेल खेल्न मात्रै सक्षम हुनेछन्। यसैले उनी अर्को टोलीमा जान सक्छ।
राजस्थान रोयल्सका पूर्व कप्तान अजिक्य रहाणे हाल दिल्ली क्यापिटल्स टिममा आवद्ध छन्।
उनले जारी लिगमा एक खेल पनि खेल्ने मौका पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा रहाणे मिड सिजन ट्रान्सफरको बेला अर्को टोलीको एक हिस्सा हुन सक्छन्।
क्रिस गेलले किंग्स इलावेन पञ्जाबको लागि एक खेल पनि खेल्ने अवसर पाएका छैनन्। पञ्जाबका ओपनरहरूले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेकाले उनले अवसर पाइरहेका छैनन्।
यद्यपि उनले अर्को खेलमा खेल्न सक्छन्। तर, मिड सिजन ट्रान्सफरसम्म दुई खेलहरू हुने छैन।
पञ्जाबका ओपनरहरूको फर्मलाई हेर्दा गेलले प्लेइङ-११ मा बढी अवसर पाउने सम्भावना कमै छ। यस्तो अवस्थामा क्रिस मिड सिजन ट्रान्सफरपछि अर्को टिमको एक हिस्सा हुन सक्छन्।
नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने दिल्ली क्यापिटल्समा आवद्ध छन्। जारी आइपीएलमा दिल्लीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको छ। हालसम्म ६ खेल खेलेको दिल्लीले पाँचमा जित निकालेको छ। र, उ अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ।
जारी सिजनमा सन्दीपले लगातार छैठौँ पटक प्लेइङ-११ मा मौका पाएका छैनन्। सुरुमै तीन वर्षका लागि अनुबन्ध भएका सन्दीपको दिल्लीमा यो वर्ष अन्तिम हो।
प्लेइङ-११ मा स्थान बनाउन नसकिरहेका सन्दीप पनि मिड सिजन ट्रान्सफरमा रहन सक्छन्। तर, ट्रान्सफरमा बस्ने या नबस्ने भन्ने निर्णय भने खेलाडी आफैंले गर्नुपर्ने छ।